Kapetị ọcha (4) Factory - China Kapetị Cleaner (4) Manufacturers, Suppliers
Ihe nhicha atọ nke atọ - DTJ3A / DTJ4A (Mmiri oyi na mmiri ọkụ)
Igwe nhicha ihe mkpuchi atọ n'ime otu na-agbapụta ihe nhicha nke ihe na-adịghị ụfụfụ na mmiri na kapeeti ahụ site na igwe ịgba mmiri na mkpuchi ikuku. N'otu oge ahụ, igwe na-ehicha ala na-eme ka ahịhịa na-emegharị ka ọ gbanwee na nnukwu ọsọ, na-agafe unyi na mgbọrọgwụ nke kapeeti site na nchapu mmiri, kpochapụ ya, hichaa kapeeti ahụ na ahịhịa ala, wee mịchaa nsị ahụ. site na igwe ngbanye ikike nke ike.
20L / 30L / 40L Kapetị Cleaner LC-20SC, LC-30SC, LC-40SC
LC usoro Kapetị Cleaner dị ka a igwe na ike ga-eji na-agbalị na mmiri dị ọcha, na ike ga-eji maka kapet ihicha. Mgbe ị na-eme nhicha kapeeti, spraying, saa, na ihicha 3process ma ọ bụrụ na zuru ezu n'otu oge nke na-eme kapeeti dị ọcha ma ọlị. Nzube ahụ bụ ihe ọhụrụ na ejiji, yana iji mgbanwe na-adaba adaba, nke dabara adaba maka paseeji, nnukwu ọgbakọ, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ wdg.
60L / 80L Kapetị Cleaner LC-60SC, LC-80SC
Ejiri igwe eji mejuputa akụrụngwa zuru oke, nke nwere ike ịbụ mgbochi mmiri na akọrọ site na ijikọ akụkụ ngwa ngwa dị iche iche.
Kapeeti mmịpụta igwe -DTJ1A / DTJ1AR (Mmiri oyi na mmiri ọkụ)
Atụmatụ Mbubata moto, nkwa dị mma. Inside na mmiri tank, dịkwuo nyo ihuenyo na-abụghị clogging. Igwe mmiri na-amịpụta 7.5m nke dị na mpụga na mmiri na-adọrọ adọrọ, na-enyere aka ihicha n'ime mita 7.5. Ihe mgbochi (ihe nhọrọ) multifunctional na otu igwe, dị oke mma, ọ dịghị mkpa iwepu ákwà mgbochi ma ọ bụ mkpuchi sofa na ịsa, sachaa mmiri mmiri na 80% akọrọ na obere oge. DTJ1AR bụ ụdị oyi na mmiri ọkụ. Nka na ụzụ Data Item DTJ1A Voltaji / Frequency 220V-240V / 50Hz Power 3230W Ugbu a ...
Atọ na-otu Sofa Cleaner-SC730
Sofa bụ ụdị ihe eji arụkarị ụlọ, ọ bụkwa ya ka a na-ejikarị eme ihe. Nke a na - eme ka ọ nwee ntụpọ dị mfe ma chọọ nhicha oge niile ma ghara ịdọka akwa sofa.